IMEX Q sy A: Misy zavatra toy ny mahazatra manaraka ve?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » IMEX Q sy A: Misy zavatra toy ny mahazatra manaraka ve?
Hetsika virtoaly IMEX
Ao amin'ny IMEX Q sy A miaraka amin'ny SAP Global Marketing dia miresaka momba ny fanampiana ireo matihanina amin'ny hetsika mba hifanaraka sy hivoatra amin'ny fomba manaraka.
Ny vondrom-piarahamonina hetsika ara-barotra dia mila manomana mialoha, amin'ny fiheverana ireo fiovana lehibe eran-tany niainantsika tamin'ny COVID-19.
Inona no maha-zava-dehibe ny fanangonana tahirin-kevitra sy ny fomba fijerin'ny mpihaino amin'ny ara-dalàna manaraka?
Ny fahatokisan'ny marika dia nisy fiantraikany tamin'ny firosoana tamin'ny varotra nomerika sy paikady.
Ny talen'ny IMEX Carina Bauer dia hanao dinidinika amin'i Nicola momba ny andraikiny tamin'ny famolavolana ny paikadin'ny hetsika SAP tao amin'ny IMEX Q sy A, ary hiara-hidinika amina fanontaniana telo lehibe eo an-tsaina izy ireo ho an'ireo matihanina amin'ny hetsika mikasa ny hanana fahombiazana: ny maha-zava-dehibe ny data- fanangonana sy fahitana ny mpihaino; ny fiantraikan'ny fahatokisan-tena amin'ny marika amin'ny fiovana amin'ny nomerika; ary ny fomba hananganana fandinihana tsara kokoa ny paikadin'i SAP ho avy sy ny drafitra famolavolana hetsika anisan'izany ny hetsika tontolo iainana sy CSR.
Misy zavatra toy ny mahazatra manaraka ve? Izany no fanontaniana Nicola Kastner, VP, Global Head of Event Marketing Strategy ho an'ny SAP, dia hizaha amin'ny Q&A an-tserasera karakarain'ny Vondrona IMEX. Misokatra izao ny fisoratana anarana ho an'ny fivoriana maimaim-poana - “Eo an-dàlana mankany amin'ny fanarenana misy tanjona, misy zavatra toy ny mahazatra manaraka ve?” - atao ny 21 aprily.